Zoro ezo kpudo ala akara Factory, Suppliers - China Zoro ezo dobe akara akara Manufacturers
Zoro ezo dobe akara akara GF-B082
GF-B082 Zoro ezo dochie akara ala, ụdị mmiri M, dabara maka ọnụ ụzọ nwere oghere n'ọnụ ụzọ. N'oge echichi, a chọrọ 38mm * 13.5mm site na oghere na ala ọnụ ụzọ. Debe ngwaahịa n'ime ya, dozie ya na nku nke ngwaahịa ahụ, ma wụnye mkpuchi njedebe mara mma na kposara. Ojiji nke ngwaahịa a emetụtaghị ụzọ ọnụ ụzọ. • Ogologo ： 380mm-1500mm • Oghere akara ： 3mm-15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha • Idozi ： Na ịghasa na fin, ọkọlọtọ mkpuchi plat ...
Zoro ezo dobe akara akara GF-B062
GF-B062 Zoro ezo dochie akara ala, ụdị mmiri M, dabara maka ọnụ ụzọ nwere oghere n'ọnụ ụzọ. N'oge echichi, a chọrọ 38mm * 13.5mm site na oghere na ala ọnụ ụzọ. Debe ngwaahịa n'ime ya, dozie ya na nku nke ngwaahịa ahụ, ma wụnye mkpuchi njedebe mara mma na kposara. Ojiji nke ngwaahịa a emetụtaghị ụzọ ọnụ ụzọ. • Ogologo ： 380mm-1500mm • Oghere akara ： 3mm-15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha • Idozi ： Na ịghasa na fin, ọkọlọtọ mkpuchi plat ...
Zoro ezo dobe akara akara GF-B042
GF-B042 Ezubere maka ọnụ ụzọ dị arọ, ọ nwere ike itinye ya ma ọ bụ tinye ya n'èzí. Ogwe na-agbanwe agbanwe nwere ike ịdị n'aka nri ma ọ bụ aka ekpe. Enwere ike imeghari ya imeghe ọnụ ụzọ aka nri ma ọ bụ aka ekpe. A na-ejikarị ya eme ihe maka ọnụ ụzọ na-achọ mkpuchi mkpuchi dị elu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na igwupụta ụlọ ọrụ. Maka ntinye nke ọkara, dobe elu nke 44mm na ala nke ọnụ ụzọ ahụ, tinye ngwaahịa ahụ, ma dozie ya na nku ya na kposara. • Ogologo ： 450mm-2300mm • Oghere akara ： 3mm-15mm。 • ...
Zoro ezo dobe akara akara GF-B09
Zoro ezo dobe akara akara GF-B08
GF-B08 Zoro ezo dochie akara ala, usoro njikọ njikọ mmanya anọ, dabara maka ọnụ ụzọ nwere oghere na oghere ụzọ. N'oge echichi, a chọrọ 28mm * 13mm site na oghere na ala ọnụ ụzọ ahụ, ma tinye ngwaahịa ahụ n'ime ya, a na-ejikwa kposara na-ekpuchi efere mkpuchi na akàrà abụọ na nsọtụ abụọ. ). Ojiji nke ngwaahịa a emetụtaghị ụzọ ụzọ niile. • Ogologo ： 330mm-1500mm • Oghere akara ： 3mm-15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha • Fixin ...
Zoro ezo dobe akara akara GF-B07
GF-B07 Zoro ezo dochie akara ala, usoro njikọ njikọ mmanya anọ, dabara maka ọnụ ụzọ nwere oghere na oghere ụzọ. N'oge echichi, a chọrọ 35mm * 14mm site na oghere iji mezie ya na ala nke ọnụ ụzọ ahụ, ma tinye ngwaahịa ahụ n'ime ya, a na-ejikwa kposara na-ekpuchi efere mkpuchi na akara na nsọtụ abụọ. Ojiji nke ngwaahịa a emetụtaghị ụzọ ọnụ ụzọ. • Ogologo ： 330mm-1500mm • Oghere akara ： 3mm-15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha • Idozi ： Na nchara igwe anaghị agba nchara ...
Zoro ezo dobe akara akara GF-B05
GF-B05 Zoro ezo dochie akara ala, usoro njikọ mmanya anọ, dabara maka ọnụ ụzọ nwere oghere n'ọnụ ụzọ. Mgbe ị na-etinye, ọ ga-enwerịrị 20mm * 12mm site na oghere na ala ọnụ ụzọ. Debe ngwaahịa n'ime ya, ma dozie ihe mkpuchi na ihe mkpuchi ahụ na nsọtụ abụọ ya na kposara (ma ọ bụ dozie ha elu site na ala nke akara akara ahụ). Ojiji nke ngwaahịa a emetụtaghị ụzọ ụzọ niile. • Ogologo ： 260mm-1500mm • Oghere akara ： 3mm-15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha • Idozi ： Na pre -...
Zoro ezo dobe akara akara GF-B04
GF-B04 Ezubere maka ọnụ ụzọ dị arọ, ọkpụrụkpụ nke ọnụ ụzọ ahụ kwesịrị ịdị ukwuu karịa 45mm, nke a na-ejikarị eme maka ọnụ ụzọ chọrọ mkpuchi mkpuchi dị elu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke ndị na-egwupụta akụ. N'oge echichi, a chọrọ 44mm * 26mm site na oghere iji mezie ya na ala ọnụ ụzọ ahụ, a na-etinye ngwaahịa ahụ n'ime ya, dozie ya na nku nke ngwaahịa ahụ, wee wụnye mkpuchi ngwụcha mma. Ojiji nke ngwaahịa a emetụtaghị ụzọ ọnụ ụzọ. • Ogologo ： 4 ...
Zoro ezo dobe akara akara GF-B03
GF-B03 Ezobechiri akara akara, M-ụdị usoro mmiri, dabara maka ọnụ ụzọ nwere oghere na ọnụ ụzọ ụzọ. N'oge echichi, a chọrọ nkedo 34mm * 14mm site na oghere n'ọnụ ụzọ. Debe ngwaahịa n'ime ya, dozie ya na nku nke ngwaahịa ahụ, ma wụnye mkpuchi njedebe mara mma na kposara. Iji ngwaahịa a emetụtaghị ụdị ọnụ ụzọ niile. • Ogologo ： 330mm-2200mm • Oghere akara ： 3mm-15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha • Idozi ： Na nchara igwe anaghị agba nchara.
Zoro ezo dobe akara akara GF-B02
GF-B02 Ezobechiri akara akara, M-ụdị usoro mmiri, kwesịrị ekwesị maka ọnụ ụzọ nwere oghere na mpempe akwụkwọ. Mgbe ị na-etinye, a ga-enye 34mm * 14mm site na oghere na ala ọnụ ụzọ. Ekwesịrị itinye ngwaahịa n'ime ya. Ekpuchi mkpuchi na mkpuchi ahụ na nsọtụ abụọ ahụ kwesịrị na kposara. Ojiji nke ngwaahịa a emetụtaghị ụzọ ọnụ ụzọ. • Ogologo ： 330mm-2200mm • Oghere akara ： 3mm-15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha • Idozi ： Na nchara igwe anaghị agba nchara • Plu ...